China Nzuzo inyefe akpụ igwe ojiji na ndụ na-emepụta na suppliers | Zhongtuo
Mgbe na-abịakwute okwu nke oyi Rolling akpụ igwe, ọtụtụ n'ime ndị na-adịghị maara na. Ma mgbe na-abịa na-ewu ụlọ, na ụbọchị ọ bụla anyị nwere ike na-ahapụ ya. Were Brazile oru ngo maka ihe atụ iji gosi otú imporant oyi Rolling akpụ igwe bu.
Brazil nwere ngụkọta ala ebe nke 8.547.400 square kilomita (46% of South America ebe), ogo ise na ụwa; na a bi na nke 202 nde, ya bụ a veritable mba Latin America. Brazil bụ ígwè ígwè ore mee ọkwá ise na ụwa, ma ọ bụ ụwa nke abụọ kasị ukwuu ekspootu ígwè ore. Mmepụta nke bauxite bụ nke abụọ naanị Australia, na ike ulo oru nwere. The minerals dị ka uranium, manganese na nickel nwekwara nwere nnukwu ebuka. Buo ego na akaụntụ maka banyere 12% nke zuru ụwa ọnụ freshwater ego. Brazil bụ ndị kasị ibu n'ụwa kọfị emeputa ihe na ekspootu na a maara dị ka "kọfị alaeze". Brazil bụkwa ndị kasị ibu n'ụwa sugar-emeputa ihe na ekspootu, nke abụọ kasị ukwuu soybean emeputa ihe na ekspootu, na nke atọ kasị ukwuu ọka na-emeputa. Ọka na-ebupụ ọkwá n'etiti n'elu ise na ụwa na ndị kasị ibu n'ụwa ekspootu beef na ọkụkọ.
Ma ọtụtụ Chinese cognition, Brazil bụ a na obodo na a iju mmiri nke ọgwụ ọjọọ, Ugboro robberies, na oké ọchịchị ọjọọ.
N'abalị nke September 2, 2018, a ọkụ wee daa na National Museum nke Brazil na Rio, na ọkụ nke dịruru n'abalị ebibi 20 nde ịnakọta. Ihe kpatara nke mbụ ọkụ ọkụ bụ na ngosi nka nke na-akwụ ụgwọ na-agbatị, ụlọ ahụ na disrepair, na ihe ngosi nka ẹdude flammable kemịkal ma kọrọ a ọkụ nchedo usoro. Ma, n'ezie, ndị ọdachi dakwasịrị nke a 200 afọ Portuguese mere ụlọ bụ kpọmkwem a doro anya e dere nke mba mbili na ọdịda: ọgba aghara ọchịchị, akụ na ụba adịghị ike, Brazil bụ a siri ike akụ ma o nwebeghị ike tufuo nke " n'etiti ego ọnyà ", ọbụna zuru ụwa ọnụ aku rankings A sample mba na-mgbe niile na-aga downhill.
N'ezie, n'elu ọmụma nwere ihe ọ bụla na-eme na isiokwu a. Taa, site na-egosi a local obere homestay (ma ọ bụ ndị njem nleta-eme) oru ngo, na-a lee anya na agụ owuru na-ahụ ngwa nke ìhè ígwè na Brazil.
Stud Track Machine, Metal oche-akpụ Machinery , Hg50 tube Line, Roofing mpempe akwụkwọ Ngidi Ime Machine, Nzọụkwụ Ngidi Ime Machine , Rolling Shutter Door Roll akpụ Ime Machinery ,